उपभोक्ताहरु 'अधिकार को संरक्षण मा व्यवस्था खरीदार फर्कन वा जहाँ यो खरिद थियो खुद्रा आउटलेट गर्न माल आदान प्रदान गर्न सक्ने प्रदान गर्दछ। यस्तो प्रक्रिया को लागि अवस्थाको धेरै हुन सक्छ: छैन रंग, आकार, आकार नजिक र यति मा।
तर, सबै उत्पादनहरू परिवर्तन वा, तपाईं आधार कुनै पनि मा प्रबन्ध छैन भने बिक्री को बिन्दु फर्कन खरिद गर्न सकिन्छ। छैन फर्के गर्न सकिन्छ कि माल को सूची को सरकार द्वारा त्यहाँ स्वीकृत भएको छ। यसलाई कुनै पनि दबाइहरु, साथै रोकथाम को मामला मा रोगहरु उपचार को एक माध्यम रूपमा घरमा लागू ती रूपमा वस्तुहरू पाइन्छन्। combs, बाल क्लिप र रबर बैंड बाल लागि, साथै toothbrushes, wigs र सामान: यो सबै वस्तुहरू कि मान्छे व्यक्तिगत स्वच्छता रूपमा प्रयोग समावेश छ।
फिर्ता हुन वा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ साटासाट माल को सूची, मिटरमा किनेको कुनै पनि अधिग्रहण समावेश छ। यो लिनोलियम, हुन सक्छ गलैँचा, पन्नी, र जस्तै। साथै, छैन फर्के गर्न सकिन्छ भनेर केही वस्तुहरू छन्:
Perfumery, कस्मेटिक उत्पादनहरु, साथै अंडरवियर, मोजा, मोजा र चड्डी।
घरेलू उत्पादन, साथै कीटनाशक र रसायन उद्देश्यले कृषि कार्यमा प्रयोग को लागि गरिएका हुन्छन्।
बहुमूल्य धातु र तिनीहरूलाई देखि उत्पादनहरु।
कुनै पनि प्राविधिक जटिल उत्पादन, जो वारेन्टी कार्ड खरीद।
गोला, बारूद, नागरिक हतियार र यसको घटक।
बिरुवाहरु, जनावर र प्रिंट।
कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, जहाज र अन्य पानी वाहन, दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिन्छ जो।
यसलाई साटासाट वा छैन भनेर गर्न सक्नुहुन्छ फर्के माल को सूची, यो यस्तो वस्तुहरू समावेश बुझ्ने छ। वास्तवमा, इच्छित भने, उनीहरूले घरमा कुनै एक नाङ्गो आँखा नोटिस हुनेछ भनेर बिगार्छ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि, उत्पादन अन्य हातमा खस्दा, यो स्वास्थ्य र मानव जीवन दुवैलाई हानिकारक हुन सक्छ। त्यसपछि त्यहाँ थप गम्भीर परिणाम उत्पन्न।
सामान फिर्ता गर्न विषय छैन, सूची एक विशेष राज्य निर्भर केही परिमार्जन हुन सक्छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
अर्डर आफ्नो खरीद फिर्ता गर्न सक्षम हुन, यो विक्रेता एक चेक लिन imperative छ। यो खरिदको शुद्धता बिक्री को बिन्दु छ पुष्टि गर्छ। एक चेक या त मा नगद रजिस्टर इम्बोस गरिएको सकिन्छ, वा विक्रेता को हस्ताक्षर युक्त एक विशेष फारम आफ्नो हात मा विक्रेता र मुद्रण दोकान भरिएको।
तपाईं बजार मा खरीद भने फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने सामान, सूची, अप्रासंगिक हुनेछ। बस यो तपाईँको खरिद दिइएको आउटलेट मा प्रतिबद्ध थियो पछि प्रमाणित गर्न धेरै गाह्रो छ। यस मामला मा, तपाईं तुरुन्त विक्रेता संग, तपाईं फिट छैन भने तपाईं वस्तु फिर्ता गर्ने कुरा गर्नु पर्छ।
सबै मापदण्ड अनुसार, गुणस्तर स्तर पूरा नगर्ने सबै वस्तुहरू, तीन समूह विभाजन गर्न सकिन्छ:
केही विकलांग 1 उत्पादन - जो नियमहरु देखि र उत्पादन को यस प्रकारको मा अवस्थित जानकारी को कुनै पनि विचलन हो सामान, छन्। समयमा खरीदार भने वारंटी अवधि, कमी सूचना, उहाँले दावी गर्न सक्नुहुन्छ:
को क्षति को डिग्री गर्न अनुपात मा मूल्य कमी;
एक निश्चित समयमा कमजोरीहरू मुक्त उन्मूलन;
समस्या को उन्मूलन मा खर्च थिए नगद खर्च को पुर्नभुगतान।
नोट जस्तै सामान कि अनिवार्य विनिमय विषय होइनन्।
महत्वपूर्ण घाइते संग 2. उत्पादन। यस मामला मा, दोष निम्न आवश्यकताहरु को एक पूरा गर्नुपर्छ:
दोष हटाउने 14 भन्दा बढी पात्रो दिन लाग्छ;
यो सबै हटाउन सकिँदैन;
वस्तु कारण सम्झौता मा वर्णन गरिएको छ कि एक विवाह यस्तो उपस्थिति, भन्दा विभिन्न बन्नेछ।
3. छलकपट सामान
छैन फर्के गर्न सकिन्छ कि माल को सूची मा पतन जो सबै उत्पादन, प्रत्येक आउटलेट द्वारा नियमन गर्नुपर्छ। र कमीकमजोरी र तिनीहरूको उपचार गरिरहेको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।
देशमा उत्पादन पल्ट कोड - कसरी नक्कली देखि मूल भेद गर्न
कि कम्पनीहरु को ट्रेडमार्क स्वामित्व गर्न आवश्यक छ?
बारकोड देशहरूमा-निर्माताहरू: तिनीहरूले के आवश्यक छ
माल को बिक्री को लागि एजेन्सी सम्झौता: एक नमूना र नियम भर्न
Amanda Hocking - रानी इ-पुस्तक
Lti एल Ksar Resort र Thalasso4* (टुनिशिया / साउसे) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
एक बच्चा मा Thrush: कारण र लक्षण
कसरी पिन्च टमाटर, सबैलाई cottager जान्नुपर्छ
लेस्ली सेन्सनसँग फास्ट हिड्ने: समीक्षा पतली
यो महिला मा progesterone वृद्धि के संकेत गर्छ
चारै ओर ओरिगेमी: एक उपहार नै सिर्जना!
आधुनिक भूमिगत घरमा: फोटो
यो जान्न आवश्यक छ जसमा हिउँदमा न्यानो देशहरूमा
व्यवस्थापन प्रणाली दृष्टिकोण - व्यापार को सफलता को लागि एक आवश्यक मापदण्ड